Badweynta Hindiya - Gpedia, Your Encyclopedia
w:es:indian ocean w:tr:Hint altkıtası w:it:Oceano Indiano Badweynta Hindiya (Af Ingiriis : Indian Ocean; Af carabi: المحيط الهندي) waa badweynta sadexaad ee ugu wayn aduunka taasi oo dhacda bariga qaarada Afrika, koonfurta Aasiya ilaa galbeedka Badweynta Atlaantik. Badweynta Hindiya waxay ka mid tahay baddaha aduunka ugu waaweyn waxaayna u dhaxeysaa qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Ustareliya. Baaxada Badweynta Hindiya waxaa lagu qiyaasaa 73.481.000 km². Waxay ku xirantahay waqooyiga-galbeed, Marinka Gardafuul. Xudduudaha Badweynta Hindiya, oo ay soo diyaarisay Ururka Caalamiga ah ee Hormarinta Caalamiga ah 1953-kii, waxaa ka mid ahaa Badweynta Koonfureed laakiin maaha badaha xeebaha ee waqooyiga woqooyiga, laakiin sannadkii 2000 ayaa IHO waxay gooni u goosatay Badweynta Koonfureed si gooni ah, taas oo soo saartay biyaha koonfurta of 60 ° S badweynta Hindiya, laakiin waxay ku jireen xeebaha badweynta waqooyiga.  Meridionally, Badweynta Hindiya waxaa laga soo xigtay Badweynta Atlantic by 20 ° bariga Meridian, koonfurta koonfurta Cape Agulhas, iyo Badbaadada Baasifiga by meridian of 146 ° 55'E, koonfurta ka soo xigta koonfurta ugu fog ee Tasmania. Inta u dhaxaysa waqooyiga badweynta Badweynta Hindiya qiyaastii 30 ° waqooyiga Gacanka Ciraaq.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Badweynta_Hindiya&oldid=205634"